Ahoana ny fomba famindrana ireo chat WhatsApp avy amin'ny iPhone mankany Android na ny mifamadika amin'izany | Vaovao IPhone
Ignacio Sala | | Android, Fampianarana sy torolàlana
Na ny iOS na ny Android dia manolotra safidy maro amintsika mba hialana amin'ny fahaverezan'ny angona raha mbola eo amin'ny sehatra iray ihany isika. Ny backups amin'ny iCloud na amin'ny kaonty Google antsika dia mahatonga ny fandefasana Android iray mankany amin'ny iray hafa na avy amin'ny iPhone iray mankany amin'ny iray hafa dia lalao ho an'ny ankizy ary tsy hamoizantsika ny atiny rehetra izay tokony hanohizan'ny finday avo lenta vaovao miaraka amin'ilay vaovao satria raha tsy nisy zavatra nitranga. SAINGY ¿inona no mitranga rehefa te hiala amin'ny iPhone mankany Android isika na avy amin'ny Android ka hatramin'ny iPhone?
Amin'ity tranga ity dia miova tanteraka ny toe-javatra. Ilay rindranasa voalaza dia mety manana mpizara azy manokana hitahiry ny angon-drakitra ary mifanaraka amin'ny Android sy ny iOS izy io, toa ny Telegram, ary avy eo tsy ho hita ny fiovana, fa raha tsy izany, toa ny WhatsApp, ny tena izy dia fa ho sarotra ny tsy ho very daholo ny chat sy ny sary rehefa mandeha amin'ny iOS mankany Android na ny mifamadika amin'izany. Saingy misy fomba hanatanterahana izany ary eto izahay dia milaza aminao ny mivantana sy tsotra indrindra.
Ny dingan'ny famindrana chat WhatsApp avy amin'ny iPhone mankany Android, na ny mifamadika amin'izany, dia mety ho lasa be pitsiny kokoa na miankina amin'ny fampiharana ampiasaintsika. Ireo tovolahy ao Tenorshare dia nametraka teo am-pelatananay ny fampiharana iCareFone, fampiharana iray izay ankoatra ny famelana anay hamindra ny angona WhatsApp amin'ny sehatra finday iray mankany amin'ny iray hafa, mamela antsika hamindra sary avy amin'ny iPhone, iPad na iPod touch amin'ny solosainantsika ihany koa isika ho fanampin'ny iTunes, handika mozika, boky ary sary amin'ny fitaovantsika, hamafa ny fampiharana ... rehetra nefa tsy mila mampiasa iTunes amin'ny fotoana rehetra
Ny fandefasana ny angona WhatsApp avy amin'ny iPhone na amin'ny telefaona Android, miaraka amin'ny iCareFone dia dingana iray tena tsotra (manan-danja) sy haingana (ireo dingana tokony harahina), satria ny faharetana farany dia miankina amin'ny habetsaky ny sary sy horonan-tsary izay notehirizinay ny kaonty WhatsApp an'ny fitaovantsika. Ny fizotrany mitovy tanteraka amin'ny rafitra fiasa roa izy io.
Vantany vao vitantsika ny fampiharana iCareFone, tokony hataontsika ampifandraiso amin'ny solo-sainay ny fitaovana roa sy ny loharano ary ny toerana itodiana ary amin'ny alàlan'ny fampiharana dia safidio izay ho loharanon'ny angon-drakitra (avy amin'ny terminal aiza no tianay esorina ny angon-drakitra) sy ny terminal itodiana (ny terminal aiza no tianay alain-tahaka) Raha vantany vao tafapetraka, tsindrio ny Transfer (raha ny aminay, dia hamindra chat WhatsApp avy amin'ny iPhone 6s mankany Samsung Galaxy) izahay.
Raha vantany vao tsindrio ny bokotra Transfer, dia hikarakara ny fampiharana manaova kopian'ny data rehetra amin'ny solosainay, ao anatin'izany ny firaketana rehetra ary hamorona rakitra fanarenana izay hamerina, hamela ny famerenana, ilay fitaovana kendrena.
Araka ny efa nanamarihako tamin'ny paragrafy teo aloha, miankina amin'ny fampahalalana ananantsika ao amin'ny lahatsoratray WhatsApp, mety handany fotoana bebe kokoa na kely ny fotoana. Nandritra ny dingana rehetra, Tsy tokony esorinay ny terminal rehetra amin'ny solosaina izany dia ampahany amin'ny fizotrany raha tsy tiantsika tsy ho tanterahina tsara ny fizotrany.
iCareFone dia misy ho an'ny roa Windows toy ny macOS.
Mba hanatanterahana ity asa sarotra ity dia afaka mahita fomba samihafa amin'ny Internet isika, ny ankamaroan'izy ireo dia sarotra be ary tsy mandeha, na amin'ny tranga tsara indrindra dia ampahany ihany no anaovany izany. Amin'ireo safidy rehetra notsapaina, ny iray nanome ahy ny valiny tsara indrindra dia ny fampiharana Windows sy Mac «dr. fone »ary Tenorshare iCareFone azonao sintonina avy Ity rohy ity ary afaka manandrana maimaimpoana ianao. Izy io dia rindrambaiko iray izay mihoatra ny famindrana ny hafatrao amin'ny iOS mankany Android, fa amin'ity lahatsoratra ity izay mahaliana antsika dia io indrindra, noho izany dia hifantoka amin'io endri-javatra io izahay.
Raha vantany vao alaina ao amin'ny solosaintsika ilay rindranasa, dia hataonay izany ary ampifandraisintsika amin'ny alàlan'ny tariby USB misy azy amin'ny Mac na PC ireo fitaovana roa ireo. Tsy maintsy ekentsika ny hafatra rehetra mitaky alalana hiseho, indrindra amin'ny fitaovana Android hametrahana ny rindrambaiko ilaina. mba hiasa araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra. Vantany vao vonona ny zava-drehetra, dia hiroso amin'ny fidirana amin'ilay faritra mahaliana antsika isika: "Famerenana amin'ny laoniny sy famerenana amin'ny laoniny".
Ao amin'ny varavarankely manaraka dia mifidy eo amin'ny sisiny ankavia ny safidy "Backup ary avereno WhatsApp", ary hiseho ireo safidy samihafa azontsika atao mifandraika amin'ny fampiharana Messaging. Amin'ity tranga ity dia misafidy ny voalohany isika: «Mamindra hafatra WhatsApp».
Hiseho avy eo ny fitaovantsika roa, ny loharanom-baovao eo ankavia ary ny mpandray eo ankavanana. Zava-dehibe io antsipiriany io satria tsy maintsy ataontsika antoka fa napetraka amin'ny toerana mety izy ireo, satria ny fitaovana eo ankavanana, ilay iray izay handray ny angon-drakitra, dia hahafoana ny fampahalalana WhatsApp tokony hamerenany ilay vaovao. Raha tsy marina ny baiko dia kitiho ny bokotra afovoany «Flip». Raha vantany vao nanamafy izahay fa eo amin'ny ankavia ny fitaovana voalohany ary eo ankavanana ny toerana halehany dia afaka manindry ny bokotra «Transfer» isika.
Fomba fanao maharitra minitra maromaro, koa mahareta, ary na dia mieritreritra aza ianao fa voasakana ny fampiharana dia andraso izay hahavitany azy. Raha vantany vao vita ny famindrana dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fitaovana alehantsika isika ary manaraka ireo dingana voalaza. Hiseho amintsika toy ny vao nametraka azy isika WhatsApp, ary tsy maintsy hamboarintsika ao koa ny nomeraon-telefaonantsika. Amin'izay fotoana izay dia ilaina ny mamerina ny angona izay voatahiry ao amin'ny fitadidiantsika anatiny, satria ny WhatsApp mihitsy no hilaza amintsika, ka ny angona rehetra nafindrantsika avy amin'ny iPhone dia nafindra tao amin'ny Android vaovao.
Ahoana ny fandefasana horonantsary lava avy amin'ny WhatsApp fa tsy manapaka azy ireo
Ity dia dingana tsotra miaraka amina hevi-dehibe roa izay tokony hitandremantsika tsy ho very vaovao, saingy miaraka amin'ireto torolalana ireto dia tsy hanana olana kely akory ianao hanatrarana izany. SYNy vokany farany dia ny hanananao ny hafatra WhatsApp anao ao amin'ilay faritra vaovao, na dia tokony homarihina aza fa tsy lavorary izy io, satria miseho misavoritaka ny resaka, ary hita eo anelanelany ny resaka nataonao arisiva. Saingy voavaha izany amin'ny minitra vitsy handaminana ny WhatsApp, ary ny zava-dehibe, dia ireo hafatra, sary ary horonan-tsary dia tsy ho voakitika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » Android » Ahoana ny fomba famindrana ireo chat WhatsApp avy amin'ny iPhone mankany Android na ny mifamadika amin'izany
Tsy mandeha ny rohy fampidinana ao amin'ny tranonkala ofisialy. Misy vahaolana ve? Niaraka tamin'ny aretin'andoha aho nanandrana namindra ny WhatsApp rehetra avy amin'ny iOS mankany Android nandritra ny 1 volana.
Tsy mandeha izy io satria mila ny kinova aloa, raha tsy izany dia tsy mandeha ny safidy handefasana WhatsApp, misy fomba hafa hanaovana azy ve?
Jair Aicardo Usme Soto dia hoy izy:
Tsy mandeha izy, milamina ny zava-drehetra mandra-pandefanao azy, any no angatahiny aminao hividy azy, izany hoe, tsy tena manao na inona na inona ilay kinova fitsapana. Misy vahaolana ve?
Valiny tamin'i Jair Aicardo Usme Soto
Mbola ratsy kokoa noho izany, mividy ilay fampisehoana ianao. Tsy maninona izany fa zava-dehibe ny famerenana ny resaka….
Manaraka ny fizotrany rehetra ianao …… Tsy maninona, tsara ny farany….
Ary rehefa vita ny fametrahana indray ny whatsapp ... dia toa hahatratra azy ianao ... fa tsia.
Hamafisinao ny nomeraon-telefaoninao, ary milaza aminao izy hamerina kopia ... Fa mitsambikina mba hahitanao ny kopian'ny Drive ...
Tsy azo atao ny mamerina ny kopian'ny eto an-toerana na aiza na aiza.
Mihevitra ianao fa nanao zavatra tsy nety ary nanomboka hatrany ...
Ary mahazo WhatsApp ianao, aorian'ny fametrahana telo, hanakanana anao mandritra ny ora vitsivitsy ary tsy hamela anao hanamarina ny isa.
Ary tsy manana kopia na whatsapp intsony ianao.
Final ... tsy mandeha aorian'ny fanandramana dimy. Amin'ny farany dia toa tsy mamerina ... henatra izany.
Ilay voafitaka dia hoy izy:
Mahatsiaro voafitaka aho
Mamaly an'i The Scammer
Angel VD dia hoy izy:
Ny programa dia tsy manome ny fahafaha-mandeha amin'ny Android mankany iOS, avy amin'ny iOS mankany Android fotsiny, avy eo ny lohateny tb dia lainga.
Valiny amin'i Angel VD
FAF dia hoy izy:
Nividy azy io volana lasa izay aho rehefa voahidy ny iphone-ko ary rehefa te hampiasa azy io indray aho hamindrana rakitra dia te-hividy azy io indray aho ...
Valiny amin'ny FAF
eq dia hoy izy:
tsy mandeha izany, mangataka ny hisoratra anarana izy ireo hanohizany ny kinova maimaim-poana ary farany ny zavatra rehetra dia ny fanerena ny fividianana. Fitaka izany
Valio ny eq
Misaotra anao! Tokony hiaiky aho fa rehefa namaky ireo fanehoan-kevitra teo aloha dia natahotra aho ary nieritreritra fa fisolokiana izany, saingy tsy toy izany, ny hafatro, ny sariko ary ny horonantsarako WhatsApp dia lany avokoa, tsy nifanaraka fa izay nilaiko dia tratra.
Ahoana no nanaovanao azy? zarao ireo parfavart amin'ny kaonty fandoavambola
Mamaly an'i emilio
Angataho ianao hividy ilay programa ...
R. Fdez dia hoy izy:
Marina fa tsy mandeha ny "demo" hamindra WhatsApp, ary lafo ny programa satria in-1 fotsiny aho no manao izany.
Tokony hazava izy ireo ary eo alohany milaza fa programa misy karama, vanim-potoana fa tsy manolotra "demo". Aleo apetrakao ny horonan-tsary sy ny vanim-potoana, aza mandany ny fotoanako. Ahhh ary nandalo ahy ilay programa tsy ho voatanisa, tsy manome safidy hanakatonana azy io, voatery nanery ny fivoahana aho hanidy azy.
Valiny tamin'i R. Fdez
Azavao ao amin'ny lahatsoratranao fa voaloa ny fandaharana, noho izany dia sorohinay ny fametrahana azy.
Mazava ny voalaza ao amin'ny lahatsoratra fa "azonao andramana maimaim-poana" ary izany no nitranga tamin'ny Janoary 2018, rehefa navoaka. Amin'izao fotoana izao tsy haiko. Na izany na tsy izany, tongasoa ianao.
Arturo Hierro dia hoy izy:
Tsy maimaim-poana ary tsy mandeha tsara amin'ny fotoana maro.
Valiny tamin'i Arturo Hierro
Tsy mandeha izany, efa nanandrana 3 ihany koa aho ary tsy nisy. Tena maharikoriko anao ireo zavatra ireo ka amin'ny farany dia tonga amin'ny fehin-kevitra tsy maintsy aloanao ianao. Saingy misafidy rindranasa hafa ankoatry ny telefaona Dr ianao, satria voafitaka ianao.
Asun, ary amin'ny farany amin'ny fampiharana inona no nahavitanao azy? Misaotra
Valiny tamin'i Marian
Mila mamindra ny resaka fampiharana inona avy amin'ny iPhone X mankany amin'ny Samsung Galaxy Note 20. Te-hahafantatra aho amin'ny varotra manao ahoana no anaovan'izy ireo izany?
Apple mandefa programa fanamboarana maimaimpoana ho an'ny iPad Air 3
Apple dia manolo-kevitra ny sasany amin'ireo mpiasan'izy ireo miasa ao an-trano